ट्रेलर यस्तो फिल्म होला कस्तो ? - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	ट्रेलर यस्तो फिल्म होला कस्तो ?
by Movie Club Nepal १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ११:२५ October 10, 2019
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार ११:२५ October 10, 2019
सन्तोषको निर्माण रहेको फिल्म ‘मेरी मामु’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बिहीवार राजधानीको जावलाखेल स्थित डिएभी स्कूलका विद्यार्थीहरु, फिल्म युनिट र संचारकर्मीको साथमा ट्रेलर गरिएको हो । फिल्मबाट निर्माता सेनका ६ वर्षिय छोरा आयुब सेन मुख्य भूमिकामा छन् । उक्त फिल्ममा कुसुम गुरुङले आयुबकी आमाको भूमिका निर्वाहा गरेका छन् । पिताको भूमिकामा अभिनेता शारुक ताम्राकार छन् भने आमाको भूमिकामा कुसुम गुरुङ प्रस्तुत छिन् ।
याम थापाकै लेखन तथा रहेको फिल्म ‘मेरी मामु’ मा आयुव, शारुक र कुसुमसँगै प्रेम गीत २ की नायिका अश्लेषा ठकुरी, अभिनेत्री भुवन चन्द, कलाकारहरु दुर्गा मल्ल ठकुरी, कृजन गौतम र सानु ताम्रकारको अभिनय छ ।
आशुसेन फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण गरिएको ‘मेरी मामु’ भदौ १५ गतेबाट अल नेपाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँने छ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन, बनिश शाह र भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको फिल्ममा अष्ट महर्जनको द्धन्द्ध छ । फिल्ममा कार्यकारी निर्माताको रुपमा रेशमजंग शाह छन् ।
हलमा चार, कुन होला वार पार
इन्दिरा “जुल्फी लर्काउदै ”!
मारुनी निर्माणको घोषणा नायिका साम्राज्ञी र नायक पुष्प
२६ मंसिर २०७५, बुधबार २२:२९
मन्त्री रुलाउने फिल्म ‘सयकडा दश’
२० माघ २०७५, आईतवार १५:२७
‘चङ्गा चेट’ को अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक !
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२८
अनमोललाई मेगास्टार भन्नु कत्तिको जायज ? (भिडियो )
२८ माघ २०७५, सोमबार ११:०६
वेनिशा अब टुल्कीमा !
१५ पुष २०७५, आईतवार १२:४२
हलमा ‘नाइँ नभन्नू ल-५’, साथमा ‘रेनी’
८ भाद्र २०७५, शुक्रबार १३:४५
अठोट कती फलदायी भयो त आँचललाई ?
१४ कार्तिक २०७५, बुधबार ११:०२